IPodPod entsha ene-iPad exhunyiwe? IBloomberg ithi lelo lixesha elizayo | Ndisuka mac
I-HomePod inokuba sesinye sezixhobo ezibalulekileyo ze-Apple ukuba iingqikelelo zabahlalutyi beBloomberg ziyenzeka. Umhlalutyi wakhe oqhelekileyo, uMark Gurman uthi ikamva lenzeka njengoko i-Apple isungula isithethi se-HomePod esizayo zibandakanya i-iPad iqhagamshelwe ngengalo yeerobhothi elandelela kwaye ilandele abasebenzisi ejikeleze igumbi.
Ngokwolwazi olutsha olunikezwe nguMark Gurman, umhlalutyi waseBloomberg, Oko kukuthi, enye yezona magazini zaziwa kakhulu, kuyacaciswa ukuba iApple inobunzima bokuba yongeza i-iPad kwiPodPod entsha. Esi sivakalisi sifumana izimvo ezimbini:
Un Imodeli entsha yePodPod. Ayiloxesha lokuqala ukuba sizive ezi ndaba kwaye ayisiyiyo kwaphela into yokucinga ukuba inkampani isandula ukuyeka i-HomePod yoqobo nangona ungazithenga. Ewe ulumke kuba ungafumana imodeli evela kwiminyaka emithathu edlulileyo.
Isixhobo esitsha esinokuphehlelelwa kwintengiso siza kuba nefayile ye- I-iPad incanyathiselwe ngengalo yerobhothi Ukulandela kunye nokulandela abasebenzisi ngamagumbi abakuwo.
Besisazi malunga nokwenzeka kokumilisela entsha imodeli yokuchukumisa isikrini, kodwa besingazi nto malunga nezi zinto zintsha zihle kangaka. Sithetha ngePod yasekhaya eya kudibanisa iPad kunye nesithethi kwaye iya kubandakanya ikhamera yencoko yevidiyo. I-Apple iphonononga ukubanakho kokunxibelelana nePad kwisithethi ngengalo yeerobhothi enokuhamba ukulandela umsebenzisi ejikeleze igumbi, ngokufana nesixhobo esitsha seAmazon seEcho Show. Ukuqwalaselwa kobuso kusetyenziselwa ukugcina abasebenzisi kwisakhelo ngexesha leefowuni zenkomfa okanye xa kucelwa ingqalelo.
IBloomberg iqaphela ukuba ukuphuculwa kwesandisi-lizwi esiphezulu kumanqanaba okuqala. Ngapha koko bayibiza njenge "ngcamango", into efana nelungelo elilodwa lomenzi. Into engenakuze ikubone ukukhanya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » IPodPod entsha ene-iPad exhunyiwe? IBloomberg ithi lelo lixesha elizayo
Ababhalisi bafuna i-Apple TV +. Isicwangciso esitsha kukunyusa inani leefilimu